Tshady : Fahafaham-baraka ateraky ny fanaganan-jaza ataon’ny ONG Frantsay iray · Global Voices teny Malagasy
Tshady : Fahafaham-baraka ateraky ny fanaganan-jaza ataon'ny ONG Frantsay iray
Voadika ny 03 Novambra 2007 9:53 GMT
Ry Sambo fiaran'i Zoé, « manempotra ahy ny fitiavanao ! »
Ny blaogin-dRaprezy! [Le blog du Prési!] izay diam-penina mpiblaogy Kameroney iray miteny Frantsay dia mamoavoafy mikasika ny fahafaham-baraka vao tsy ela, izay nateraky ny fihetsika nataon'ny ONG Frantsay iray izay nitetika ny hanavotra ankizy miisa 103 izay avy any amin'ny faritra manolo-bodi-rindrina iombonan'i Tshady sy Sodàna izay nambara fa mpitsoa-ponenana avy any Darforo, ary kasaina hatsangana ray aman-dreny any Frantsa mba hamonjena azy ireo tamin'ny « fahafatesana izay efa niandry azy ».
Mambra enina mpikambanana amin'ny fikambanana mpanao soa L’Arche de Zoé (Sambo fiaran'i Zoé) no nosamborina nohon'ny fiampangana « fakana an-keriny zaza tsy ampy taona sy fitetehana ny hanao hosoka ny “état civil” » izany hoe hanova ny anaran'ireo ray aman-dreniny. Ny setrin'izany eo imason'ny lalàna dia fanagadrana dimy ka hatramin'ny roapolo taona, arahina asa an-terivozona.
Nitsipaka ireo fiampangana fanaovan-dratsy ireo ny Sambo fiaran'i Zoé, sady nanambara fa zaza kamboty avy any Sodàna ireto zaza ireto. Anefa arak'ireo tatitra, ireo mpiasan'ny firenena mikambana sy ireo diplaomaty Frantsay dia milaza fa maro amin'ireo ankizy no Tshadiana fa tsy Sodàney. Sady tsy misy manome alàlana izay fananganan-jaza ataon'ny tera-tany vahiny na i Tshady na i Sodàna.
Nanampy trotraka ny raharaha ny filoham-pirenena Tshadiana, Idriss Déby izay nanontany tena raha ity fikambanana mpanao asa soa ity izay mitaky vola 2'400 euro isaky ny zaza atsangana [amin'ireo ray aman-dreny manam-paniriana] dia nikasa ny hivarotra ireto zaza hoan'ireo mpanolana ankizy na hatao fakana taovan'olombelona hitsaboana olon-kafa.
Tezitra ny filoham-pirenena Frantsay Nicolas Sarkozy. Nanenjana ny fifandraisana nipetraka teo amin'ny firenena roa tonta tokoa manko ity raharaha ity, ary ratsy filatsaka satria [mandrafy] ny fikasan'ny Vondrom-pirenena Erôpeana ny hamelatra andian-tafika, izay eo ambany fibaikoan'i Frantsa, hampandry tany any Atsinanan'i Tshady sy Avaratra Atsinanan'ny Repôblika Ivon'i Afrika.
Toy izao ary no ambaran'ny blaogy Le blog du Prési! mikasika ny raharaha Zoé, ny fananganam-jaza ataon'ireo olo-fanta-daza sy ny fitiavana izay manempotra, na dia hetsika nateraky ny fikasan-tsoa aza :
… nitety habakabaka, namakivaky tany hay mba hamonjena zanaka Afrikana mampalahelo vitsy any Tshady ny Sambo fiaran'i Zoé (SFZ). Hitondra miverina zaza miisa 103 any amin'ireo fianakaviana efa tsindrian-daona miandry no tanjona. 2'400 euro isam-pianakaviana mpanangana no vidin'ny fanavotana.
Efa maty paika daholo ny tetika rehetra, ary nizotra tsara ambarak'ity dia farany izay miandry ny fiaingan'ny fiara-manidina fiverenana ity, indrisy anefa fa nitsabahan'ny fanjakana Tshadiana ilay raharaha, voala sarona ilay nafenina ary dia nanomboka teo ny fiampangana « fakana an-keriny zaza tsy ampy taona hitetehana ny hanao hosoka ny “état civil” sy fanambakana ». Mazava ho azy fa eo koa no nahitana ny fahazendanan'ireo mambran'ny SFZ izay tsy nihevitra afa-tsy ny hamonjy izao tontolo izao, ny hamonjy ireto zaza tamin'ny fahafatesana. Dia fantatra indray taty aoriana fa tsy kamboty akory ireto zaza, ary tsy [mpitsoa-ponenana] avy any Darforo akory aza, lainga ratsy tototra.
Inona no maha-samihafa ny fananganan-jaza ara-asa-soa sy ny fananganan-jaza takalom-bola?
Vao volana vitsivitsy lasa izay dia i Madonna [mpihira Amerikana malaza] no nampiasa vola dollars maro mba hanaganan-jaza Nizeriana -aleo io teny io no apetrako mba tsy hampiasako teny hafa. Nalaiko amboniny, nalaiko ambaniny fa tsy hitako velively izay maha-samihafa ny fakana an-keriny ara-fanaovana asa-soa sy izay fananganan-jaza azo amin'ny varo-boba. Dia mba niandry aho izany faha-sadaikarana avy amin'ny vahoaka sy ireo fahampalalam-baovao toy izay niseho volana vitsivitsy lasa izay [tamin'ny raharaha Madonna]. [Iza indray no manaraka ?] Anjaran'ilay fatra-fanta-daza Paris Hilton indray izany ny manangana zaza Roandey [FANAMARIHANA: zanaka mpanefoefo Amerikana izay isan'ny mpandova ireo andiana hôtely mitondra ny anarany, ary manao ho vain-dohan- draharaha ny fanaovana izay zavatra rehetra hitateran'ireo gazety izay fihetsiny, eny hatramin'izay heverina ho mamoa-fady aza]. Izaho dia isan'ireo mpomba [maneso] ! Fa rehefa atao izy ity dia mba ataovy « tsara » amin'izay dia hiharihary amin'ny be sy ny maro fa « korontaninay ilay raharaha sady ataonay amin'ilay fanaovana azy tsara ! »
Fomba roa samihafa, vokatra mitovy, tsy mitovy angamba ny tanjona, anefa dia fanontaniana re izao e ! Tena mila io fanaovantsoa an-tery io ve ireo fianakavian'ireto zaza ? Ary na dia ity tany « tondra-dronono sy tantely » ampanantenaina reto zaza ireto, dia tena sarobidy loatra ve izy ity ka anaovana tsinotsinona ireo rafi-pianakaviana nihaviana sy hampiantrano ?
Ary raha ity ka misy olana amin'ny kirakiram-pananganan- jaza rehefa tonga any Frantsa, na koa misy olana eo anivon'ny fianakaviana [mpanangana] izay vao mainka aza loza. Angamba dia ho nahita Tshadiana 103 nararaka an'arabe natao tolo-botsitra hoan'ny Atitany [Ministeran'ny Atitany Frantsay] toy ireo alika Dalmatiens miisa 101 [sarimihetsika malaza].
Ry Zoé ô, ianao sy ny sambo fiaranao, manempotra ahy ny fitiavanao !
ha!ha! izaho vao saika hametraka ny ahy ihany koa! soa ihany aho fa nijery teto aloha fa raha tsy izany dia roa avy hatrany ny lahatsoratra!
03 Novambra 2007, 10:30
Fa lasanao any ary ve ilay clé USB fitondrako mody handikana teny no ohatran’izay soratako rehetra no hitako eto! saiky gaga mihitsy aho hoe fa angaha moa aho efa nametraka ilay lahatsoratra?
Izany no tena kely sisa no tsy nitovizana! mba marina mafy!
03 Novambra 2007, 10:44
Izaho koa aza mba voan’izany matetika, midika ve izany fa lahantsoratra mitovitovy no safidintsika hampitaina amin’ny mpamaky amin’ny teny Malagasy ?
Ilazao ihany raha heverinao fa mila fanatsarana amin’ny fomba fiasa mba ialana amin’ny herim-po lany amin’ny dikanteny roa hoan’ny lahantsoratra iray.
03 Novambra 2007, 21:17
Tena tsaratsara angamba mifanoratra mialoha indray isika raha izany. Asa anefa…momba ny lahatsoratra fotsiny io!
05 Novambra 2007, 14:52